Imfashini - Umagazini Design
I-Loafer Yokugqoka Yanamuhla
Lwesibili 14 Juni 2022
I-Loafer Yokugqoka Yanamuhla U-Le Maestro uguqula isicucu sokugqoka ngokufaka iDirect Metal Laser Sintered (DMLS) titanium 'matrix heel'. 'Isithende se-matrix' sinciphisa isisindo esibonakalayo sesigaba sesithende futhi sibonisa ubuqotho besakhiwo sezicathulo zokugqoka. Ukuze ugcwalise i-vamp ebukekayo, kusetshenziselwa isikhumba esinokusanhlamvu okuphezulu ekwakhiweni okuhlukile kwesakhiwo se-asymmetrical. Ukuhlanganiswa kwengxenye yesithende kuya phezulu manje sekuhlanganiswe nesilika elicwengekile nelicwengekile.
Msombuluko 13 Juni 2022
I-Qipao Yesimanje Ukuphefumlelwa kuvela ku-Chinese Relics, "I-Ceramics" yisibonakaliso esithandwa kakhulu noma ngabe sivela ebukhosini nakubantu. Esifundweni sami, ngisho nanamuhla izindinganiso eziyisisekelo ze-Chinese Aesthetic zemfashini neFeng Shui (ingaphakathi nokwakheka kwemvelo) aziguquki. Bathanda ukubona, ukubona, ukufisa nokufisa. Ngingathanda ukuklama i-Qipao ukuletha okushiwo kanye nesici se-ceramics kusuka kubukhosi basendulo kuya emfashini wanamuhla. Futhi kuthusa abantu abakhohlwa amasiko abo nobuzwe babo noma yinini lapho sikwizizukulwane.
Sonto 12 Juni 2022
I-Brooch Umuntu ngamunye uhlukile futhi ungowangempela. Lokhu kubonakala ngisho nasemaphethini emilenzeni yethu. Imigqa yokudonswa phansi nezimpawu zezandla zethu nayo ingeyangempela. Ngaphezu kwalokho, umuntu ngamunye unohlu lwamatshe, asondele kubo ngekhwalithi noma axhumene nemicimbi yomuntu. Zonke lezi zici zinikeza ukubuka okucabangayo okuningi okufundisayo nokuhehayo, okuvumela ukudala ubucwebe obenziwe ngezifiso ngokususelwe kule migqa nezimpawu zezinto ngazinye. Lolu hlobo lomhlobiso nobucwebe - kwakha ikhodi yakho yobuciko
Mgqibelo 11 Juni 2022
Ubucwebe Sifakazela impi engapheli phakathi kokuhle nokubi, ubumnyama nokukhanya, imini nobusuku, isiphithiphithi nokuhleleka, impi nokuthula, iqhawe ne-villain nsuku zonke. Kungakhathaleki ukuthi siyiphi inkolo noma ubuzwe, sitshelwe le ndaba yabangane bethu abajwayelekile: ingelosi ihlala ehlombe lethu lokunene nedemoni ngakwesobunxele, ingelosi isincenga ukuba senze okuhle futhi siqopha imisebenzi yethu emihle.Usathane usincenga ukwenza okubi nokugcina umlando wezenzo zethu ezimbi. Ingelosi isingathekiso se "superego" yethu kanti udeveli umela u- "Id" nempi eqhubekayo phakathi konembeza nokungazi.
Lwesihlanu 10 Juni 2022
Ubucwebe I-Jewellery I design iveza imizwa yami. Ungimele njengomculi, umqambi futhi njengomuntu. Isisusa sokudala i-Poseidon sasibekwe emahoreni amnyama kakhulu empilo yami lapho ngangizizwa ngithukile, ngisengozini futhi ngidinga ukuvikelwa. Ngokuyinhloko ngidale ukuthi leli qoqo lisetshenziselwe ukuzivikela. Noma lowo mbono usuphelile kulo lonke iphrojekthi, usaqhubeka. I-Poseidon (unkulunkulu wolwandle ne "Earth-Shaker," yokuzamazama komhlaba ezinganekwaneni zamaGreek) iqoqo lami lokuqala elisemthethweni futhi kuhloswe ngalo ukuthi kube nabesifazane abanamandla, okuhloswe ukuba banikeze lowo ofaka umuzwa wamandla nokuzethemba.
Lwesine 9 Juni 2022
Ubucwebe Umqondo oyisisekelo we-odyssey ka-monomer ubandakanya ukumboza imilobo ebushelelezi, yesimo sejometri ngesikhumba esisetshenzisiwe. Kulokhu kuvela ukufana kokucaca nokuhlanekezela, ukucaca nokufihlwa. Zonke izinhlobo zejometri namaphethini zingahlanganiswa ngokuthanda, okuhlukahlukene futhi kuhlanganiswe ngokungeziwe. Lo mbono othokozisayo nolula uvumela ukwakheka kwemidwebo ecishe ibe ingafinyeleleki, ihlangana ngokuphelele namathuba anikezwa yi-prototyping esheshayo (ukuphrinta kwe-3D), njengoba ikhasimende ngalinye lingaba nento eyenzelwe umuntu ngamunye futhi eyingqayizivele (vakashela: www.monomer. eu-shop).
Poise Isibani Setafula Eliguqukayo Sonto 26 Juni
Memento Incwadi Evulekile Mgqibelo 25 Juni
Exxeo Upiyano We-Hybrid Okunethezeka Lwesihlanu 24 Juni
I-Loafer Yokugqoka Yanamuhla I-Qipao Yesimanje I-Brooch Ubucwebe Ubucwebe Ubucwebe